» बिनयको घिनलाग्दो हर्कत सपनालाई छोरी भन्दै यस्तो सम्म गरेका रहेछन! बाबू आमा रुदै आए मिडियामा (भिडियो सहित ) बिनयको घिनलाग्दो हर्कत सपनालाई छोरी भन्दै यस्तो सम्म गरेका रहेछन! बाबू आमा रुदै आए मिडियामा (भिडियो सहित ) – हाम्रो खबर
बिनयको घिनलाग्दो हर्कत सपनालाई छोरी भन्दै यस्तो सम्म गरेका रहेछन! बाबू आमा रुदै आए मिडियामा (भिडियो सहित )
2021, February 6th, Saturday
बिनय जङ्ग बस्नेतको घिनलाग्दो हर्कत सपनालाई छोरी भन्दै यस्तो सम्म गरेका रहेछन! बाबू आमा रुदै आए मिडियामा !
काठमाडौ । बेलायती समाचार संस्था ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ सर्भिस (बीबीसी)ले बनाएको उत्प्रेरक र प्रभावशाली सय महिलाको सूचीमा नेपालकी सपना रोका मगर पनि परेकी छन् । उनले पशुपति आर्यघाटमा बेवारिसे शवलाई दागबत्ती दिँदै आएकी छन् ।
‘यस वर्ष २०२० मा पनि सय महिलालाई उत्कृष्टको सूचीमा समावेश गरिएको छ, जो परिवर्तन र उत्प्रेरक कामको नेतृत्व गर्दै अघि बढेका छन्’, बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
१८ वर्षीया सपना म्याग्दीको मंगला गाउँकी हुन् । घरबाट पढ्न भनेर काठमाडाैं आएकी उनले अहिलेसम्म दर्जनाैं बेवारिसे शबलाई दागबत्ती दिइसकेकी छन् । बेवारिसे शब ब्यवस्थापन गर्ने क्रममा उनले बुबा मानेका बिनय जङ्ग बस्नेतको घिनलाग्दो हर्कत बाहिरिएको छ । सपनालाई यौ$न दुव्र्यवहार गरेर मार्नेसम्मको धम्की दिएको भन्दै सपनाको बुबाआमा रुदै मिडियामा आएका छन । बाकी भिडियोमा
“ठगी आ,रोपमा युवा संघका केन्द्रीय सदस्य प,क्राउ”